တတိယမြောက် ရင်သွေးလေးအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ Michael Buble’ - MoviesFan Movie News
တတိယမြောက် ရင်သွေးလေးအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ Michael Buble’
ကနေဒါနိုင်ငံသား အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Michael Buble’ နဲ့ ဇနီးသည် Luisana Lopilato တို့မောင်နှံဟာ သိပ်မကြာခင် ကာလအတောအတွင်းမှာ သူတို့မိသားစုဘဝထဲကို ရောက်ရှိလာတော့မယ့် တတိယမြောက် ရင်သွေးလေးအတွက် ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Buble’ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်ရဲ့ အစောပိုင်းကာလမှာ Today FM နဲ့ အင်တာဗျူးဖြေရတုန်းကလည်း မိသားစုဘဝနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို အမေးခံရတုန်းမှာ အဲဒီအကြောင်းလေးကို ၀မ်းသာအားရနဲ့ တခုတ်တရ ထည့်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော့်မိသားစုကတော့ အားလုံးကောင်းနေတာပါပဲ။ ပြီးတော့လည်း နောက်ထပ် သုံးပတ်လောက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဘဝထဲကို သမီးလေးတစ်ယောက်က ရောက်လာတော့မှာဗျ။ ဒီအကြောင်းတွေကို Public မှာ ကျွန်တော် တစ်ခါမှ ပြောမပြဖူးခဲ့တာလည်း အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ကျွန်တော် ပြောပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ သမီးလေးတစ်ယောက် ရတော့မယ်”
တကယ်တော့ ၄၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Buble’ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလလောက်တုန်းက ဒီရင်သွေးလေးရဲ့ အကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မီဒီယာတွေကို ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း ပြောခဲ့ဖူးသေးတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရင်သွေးလေးက ယောကျာ်းလေးလား၊ မိန်းကလေးလား ဆိုတာကို အခုမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ပြောပြတာတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရမ်မီဆုကို လေးကြိမ်ရခဲ့ဖူးသလို တခြားဂီတဆိုင်ရာ ဆုတွေကိုလည်း တော်တော်လေးရခဲ့ဖူးတဲ့ Buble’ နဲ့ အာဂျင်တီးနား နိုင်ငံသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူ့ဇနီးသည် Lopilato တို့ဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းကာလတွေမှာ စတင်ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြတာပါ။ နောက်… ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာမှာ စေ့စပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့်၂၀၁၁ မတ်လကိုရောက်မှ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး သားဦးလေးဖြစ်တဲ့ Noah ကို ၂၀၁၃ သြဂုတ်လထဲမှာ မွေးခဲ့ကြပြီး၊ ဒုတိယသားလေးဖြစ်တဲ့ Elias ကိုတော့ ၂၀၁၆ ဇန်နဝါရီလထဲမှာ ထပ်မွေးခဲ့ကြရပြန်လို့ သိရပါတယ်။
သားနှစ်ယောက်ပဲရှိနေသေးတဲ့ သူတို့မိသားစုဘဝလေးထဲကို သမီးလေးတစ်ယောက်က ခုမှပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရောက်လာတော့မှာမို့ Buble’ တို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ တော်တော်လေးကို ၀မ်းသာနေကြတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Buble’ က ဒီအကြောင်းတွေကို လူတွေသိအောင် ပြောပြနေခဲ့တာဖြစ်သလို၊ သူ့ဇနီးသည်ဖြစ်တဲ့ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် Lopilato ကလည်း အာဂျင်တီးနားမှာတုန်းက သရုပ်ဆောင်/ မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သူပီပီ အခုသမီးလေးရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရတဲ့ သူမရဲ့ပုံကို ခဏခဏ ဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်ပြီး Instagram ပေါ်မှာ ကြည်နူးစွာနဲ့ တင်နေတတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Con está onda genial, y esta combinación de colores que me mato lleveamis hijos al colegio! #topmodel #luspirit #youjealous #lutips #haha 🤰🏼👠👗💅🏻💄💋
A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) on Jun 6, 2018 at 4:48am PDT
အင်တာဗျူးတွေမှာ မိသားစုအကြောင်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို အမေးခံရတိုင်း Buble’ က “အားလုံးကောင်းပါတယ်”… လို့သာ ဖြေသွားပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ဟုတ်မယ် မထင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့ သားဦးလေးဖြစ်တဲ့ Noah လေးဟာ အခုမှ ၄ နှစ်ကျော်ကျော် အရွယ်လေးပဲ ရှိသေးပေမယ့် ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာလလောက်ကတည်းနေကစပြီး အခုလတ်တလောအချိန်အထိ ကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးကို ခံစားနေခဲ့ရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။ သူ့သားဦးလေးက ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရတာကို စသိရတဲ့ အချိန်တုန်းကဆိုရင် Buble’ ဟာ ငရဲပြည်ကို အရှင်လတ်လတ် ရောက်သွားရသလို ခံစားလိုက်ရပြီး ဂီတလုပ်ငန်းတွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ဖို့အထိ တွေးခဲ့ဖူးတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ သားလေးက ခုနောက်ပိုင်းမှာ နည်းနည်းသက်သာလာသလို ရှိလာလို့ ရှိုးပွဲတွေ ပြန်ဆိုဖို့ ပြင်နေရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ မီးတကာ့မီးထဲမှာ သားသမီးအတွက် ပူပန်ရတဲ့မီးက အပူပြင်းဆုံး၊ အပြင်းထန်ဆုံးပဲ မဟုတ်လားရယ်။
Previous Post: Maisie Williams ဟာ Game Of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို နှုတ်ဆက်ရပြီလား….?
Next Post: Stephen Hawking ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း အပြည့်အစုံကိုမှ စိတ်ဝင်စားရင်